SAFARKII IBRAAHIM SAALAX EE SEATTLE
SomaliTalk.com | Seattle, USA
Markii iigu horeysay ee aan booqasho ku imid Mareekanka ayay markan ahayd. Waa talaadadii ina soo dhaaftay. Magaalladii iigu horeysay ee ay diyaaraddii na sidday ay soo cagadhigatay waxay ahayd Seattle Washington, oo dhacda waqooyi galbeed Mareekanka. Waa magaallo tirada dadka deggan ay is le'eg yihiin guud ahaan shacabka Denmark. Waa shan malyuun iyo lix boqol kun qiyaastii.
Waqtigii ay ahayd inay diyaaraddii aan saarnayn ay soo cagadhigato ayaa waxay ka soo hormartay ku dhowaad saacad, waxaan intaan gudaha garoonka diyaaradaha caalamaiga Seattle dhex socday ay ishayda qabanaysay wiilal dhalinyaro soomaaliyeed ah oo iyagu ka shaqeenayay garoonka. Waxaa ii suurtoowday inaan qaarkood la hadlo oo aan la sheekeesto, kadib markaan imid dibadda garoonka.
Waxay ii sheegeen inay jiraan boqollaal soomaaliyeed oo garoonka ka shaqeeya, ayna dhammaantood si weyn ugu faraxsan yihiin shaqadooda. Waxaan sidoo kale isla garoonkii Seattle kula kulmay wiil soomaaliyeed oo isagu aanan garoonka ka shaqaynin, hase ahaatee ka mid ah darwallada soomaaliyeed ee deggan gobolka Seattle Washington. Magaciisu waa Guhaad Mohamud Ahmed. Waa 29 jir, leh qoys ka kooban xaas iyo 2 caruur. Qiyaastii 70 saacadood ayuu usbuucii shaqeeyaa, waa saacado badan. Denmark waxaa caadi ka ah in la shaqeeyo ilaa 37 saacadood. Isagu wuu laba jibbaaray saacadahaas. Is barasho iyo hadal kooban kadib, wuxuu isagoo dhoola caddaynaya ii soo jeediyay inuu igu soo wareejiyo meelo ka mid ah magaallada kahor intaanan aadin gurigii aan u socday. Inkastoo aan jirkayga ka dareemayay daalkii sababay 11-kii saacadood ee aan diyaaradda saarnaa, haddana furfurnaantiisii bashaashnimo ee dabacsanayd ayaan durbadiiba la hilmaamay daalkii i hayay, sidiina ayaan ugu booday gaarigii xammuulka ahaa ee uu darawalka ka ahaa Guhaad M. Ahmed.
"3 sanno qiyaastii ayaan shaqadan darawlnimo ka shaqeenayay, waxaan ka soo shaqeeyay magaalooyin badan oo dalka ka mid ah sida koonfur ilaa waqooyi "Florida ilaa Minnesota" iyo dhinaca galbeed ilaa bari sida gobolka "Maine ilaa California" ayuu ku billaabay sheekadii Guhaad ee i gelisay cabsi shaki wadato, waxaana annigoo la kaftamaya ku iri "waxaan hadda rajeenayaa inaynan u soconin magaalooyinkaas?" wuxuu isagoo qoslaya igu yiri "maya maya, hadda waan iska dhaafay safaradaas dhaadheer, qofka reerka lihi aad ayay ugu adag tahay inuu reerkiisa ka maqnaado billooyin badan" ayuu yiri. Inkastoo ay shaqadan adag tahay ayna wadato xaalado khatar oo aanan yarayn, haddana sida uu Guhaad ii sheegay waxay darawallada shaqadiisa oo kale ka shaqeeya qaataan mushaaro caqligaaga ka weyn. Dabcan, marka loo eego mushaarka uu qaato shaqaalaha caadiga ah ee u shaqeeyaya shirkadaha kala duwan ee USA.
Mushaarka uu Guhaad qaato, sida uu ii sheegay ayaa la mid ah mushaarka uu qaato profasoorka wax ka dhiga Jaamacadda Koonfurta ee ku taalla magaallada Odense, dalka Denmark. Waana tan keentay inay soomaali badan doontaan leesinka gawaarida waaweyn si ay u billaabaan shaqada darawalnimo. Wuxuu Guhaad ii sheegay intaan la socday, inay jiraan soomaali aad u badan oo iyagu wada gawaarida waaweyn, waxayna intooda badan shaqadan billaabeen muddooyinkii ugu danbeeyay.
Shirkadda gawaarida xammuulada ee lagu magacaabo Swift ayuu Guhaad markiisii hore u shaqeenayay, hase ahaatee markii uu shaqadaas ka dhaxlay khibrad iyo aqoon dheeri ah ayuu ku dhiiraday inuu iibsado gaari uu isagu leeyahay, waana gaarigii xammuulka ahaa ee aan muddo labo saacadood saarnaa, kahor intaanan aadin xaafaddii aan ku deggi lahaa magaallada Seattle. Soomaalida Seattle waxay tiradoodu kor u dhaafeen 10 000 qof, waxayna isugu jiraan dhalinyaro wiilal iyo gabdho leh oo dhigta jaamacadaha iyo macaahidda Seattle, halka ay jiraan soomaali kale oo iyagu u beeray suuqa ganacsiga. Maqaayado iyo dukaanno iyo Hoteello la seexdo oo ay soomaalida leeyihiin ayay indhahaagu qabanayaan markaad soo gashid xaafadaha ay ku badan yihiin soomaalida.
Maqaayadda Marwo ayaa ugu caansan meelaha la fariisto, lagana cunteeyo. Qowmiyado afrikaan ah oo ay ka mid yihiin suudaaniyiinta ayaa soo weheshada cuntooyinka macaan ee ay yaaliin maqaayadaha soomaalida. Maqaayaddan Marwo ayaa intaad cuntaynaysid daawanaysaa talefishinka carbeed ee Al-Jazeera, inta fahamta carabiga waxay tv-gaas kala socdaan wixii warar ah, halka dhalinyarada xiiseeya cayaaraha ay ka daawadaan kanaalada kala duwan ee isboortiga soo daaya.
Xaafadaha soomaalida ay deggaan, furddada ama tekedda Seattle iyo tareenka isteeshinka Seattle markaan cagta soo marinay kadib, ayuu Guhaad jeclaystay inaan gurigiisa u qado doonano, sidiina ayaan isagoo weli la socdo u nimid guriga Guhaad Mohamed Ahmed. Intuu gaarigiisa igu waday oo aan dhex soconay magaallada, waxaan si weyn u dareemayay kala fogaanshaha xaafadaha soomaalida ay kala deggan yihiin.
Gurigii Guhaad waxaan kula kulmay Sufyaan oo 5 jir ah iyo Surreeya oo iyaduna 3 jir ah, labaduba intaan la joogay igu boobeen su'aalo aad u badan, iyagoo igu weydiinayay afka ingiriisiga. Intay caruurta hadlayeen kama aanan maqlin hal erey oo soomaali ah, xittaa markay lahaayeen hooyo iyo aabo waxay ku oranayeen afka ingiriisiga.
Faafin: SomaliTalk.com | APr 17, 2006